Dib-u-soo-celinta: Sida Qabanqaabada Isbeddelku u Korin Doonto Summada Shirkaddaada | Martech Zone
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in dib-u-samaynta ay u soo saari karto natiijooyin wanaagsan oo wanaagsan ganacsiga. Waxaadna ogtahay in tani run tahay marka shirkadaha ku takhasusay samaynta summadaha ay yihiin kuwa ugu horreeya ee dib u soo saara.
Qiyaastii 58% wakaaladaha ayaa dib u sumadeeya si ay kor ugu qaadaan kobaca wayn iyada oo loo marayo aafada COVID.
Ururka Ganacsiga Wakaalada Xayeysiinta
Waxaan at Liin dhanaan Intee in le'eg ayay dib-u-soo-noqon iyo matalaad summeedka joogtada ah ka hor marin kartaa tartankaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale baranay habka adag ee fudud sida dib-u-samaynta laga yaabo inay u dhawaaqdo, waxay ka badan tahay sameynta calaamad cusub ama helitaanka magac cusub. Taa beddelkeeda, waa geedi socod joogto ah oo abuurista iyo ilaalinta aqoonsi cusub - si joogto ah u gudbinta fariinta aad rabto in macaamiishaadu ay ku xidhmaan astaantaada.
Astaanta wanaagsan ee dhammaan aaladaha oo dhan waxay si weyn u kordhisaa dakhliga ururka ilaa 23 boqolkiiba.
LucidPress, Xaaladda Joogteynta Summada
Tanina waa in la xuso dhowr. Maqaalkan gaaban iyo kan dulucda, waxaanu kugu dhex mari doonaa habka dib-u-habaynta, wadaaga talooyinka, daaha ka qaadi doona xumaanta caadiga ah, waxaanu ku tusi doonaa sidaad uga bixi lahayd.
Sheekada Lemon.io Rebrand
Kaliya waxay qaadataa 7 ilbiriqsi si aad u samayso aragti hore oo adag.
Taasi waxay la macno tahay in todobada ilbiriqsi ay noqon karto waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku qanciso macmiilka suurtogalka ah inuu kaa doorto tartankaaga. In kasta oo tani ay keligeed caqabad ku tahay, si joogto ah ugu qancinta macaamiisha inay ku sii doortaan adiga way ka sii adag tahay. Garashadaasi waxay inoo horseeday guusha aynu maanta ku mashquulno.
Aan si kooban kuugu sheego taariikhda lemon.io.
Lemon.io waxaa markii hore la sameeyay 2015 markii aasaasaha (Aleksandr Volodarsky) uu aqoonsaday farqiga u dhexeeya niche shaqaaleysiinta madaxa-bannaan. Halkaa marka ay marayso, calaamadaynta ayaa ahayd waxa ugu dambeeya ee maskaxdeena. Sida ganacsiyada cusub intooda badan, waxaan samaynay khaladaad bilawgii safarkayaga, kuwaas oo mid ka mid ah uu ahaa magaca nafteena "Coding Ninjas." I rumayso, waxay u dhawaqaysay si sax ah wakhtigaas sababtoo ah waxay ahayd mid casri ah, waxaanan saarnay inta badan diiradayada abuurista nuxurka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan helnay baraarujin qallafsan markii aan ogaanay in kobaca ganacsigu uu hoos u dhacay oo nuxurka keligiis uusan xitaa u dhowaan inuu ku filnaado guusha ganacsigeena. Waxaan u baahanahay wax intaas ka badan si aan uga dhigno adduunka shaqaaleysiinta madax-bannaan ee aadka u tartamaya. Tani waa markii ay bilaabatay sheeka dib-u-habayntayada.
Waxaa jira casharo badan oo xiiso leh oo aan ka baranay socdaalkeena dib u habeynta, waxaana rajeyneynaa, marka aan ka sheekeyno sheekadeena, waxaad sidoo kale soo qaadan kartaa qaar ka mid ah kuwa faa'iido u leh astaantaada.
Maxaa Loo Baahnaa Rebrand
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sababta aan dib u summeynta u sameynay iyo muhiimada ay leedahay.
Hagaag, ka sokow xaqiiqda ah inaan ka soo gudubnay xilligii Ninjas iyo Rockstars oo aan la wadaagnay magac dhawaaq hore oo leh dugsi barnaamij oo Hindiya ah, waxaan sidoo kale ogaannay inaan u baahanahay inaan firfircoonaano si aan ugu noolaano suuqa xorta ah ee aadka u tartamaya. Goobaha suuqyada xorta ah ee la hubiyay ayaa ah kuwo ciriiri ah oo sida kaliya ee lagu soo bixi karaa ay tahay in la helo sumad xooggan oo heersare ah.
Markii hore, waxaanu rumaysanahay in guul-darradeenu ay sabab u tahay naqshadeena, waxaanan ku degdegnay cagahayaga si aan ugu dhowaanno naqshadeeye waxaanan ka codsannay inuu dib u habeyn ku sameeyo blogga, kaas oo uu si xushmad leh u diiday oo soo jeediyay guud ahaan dib u habeynta. Taasi waxay ahayd ciddiyihii ugu dambeeyay ee naxashka, waxayna ahayd meeshaas, baahida dib u habeynta ayaa soo muuqatay. Dhab ahaantii, waxaan ogaanay inaanan haysanin calaamad gabi ahaanba, sidaas darteed, waxaan u baahanahay inaan abuurno mid. Tani waxay ahaanaysaa mid ka mid ah go'aamadii ugu dhiirranaa uguna faa'iidada badnaa ee aan waligeen samaynay urur ahaan.
Halkan waxaa ah qayb-tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida aan u fulinay habka dib-u-habaynta. Tilmaamahayagu maaha kuwo dhammaystiran; si kastaba ha ahaatee, waxaan noqon doonaa deeqsi ah sida ugu macquulsan macluumaadka laga helay khibradeena. Waa kuwan soo koobidda tillaabooyinka aan raacnay:
Waxaan abuurnay qof sumad leh iyo mascot calaamad ah – Xidhiidhka ka dhexeeya labadoodu waa sidatan: Qofka astaantaada ah ayaa ah jilaha ugu weyn ee sheekadaada, kaasoo la kulmi lahaa caqabado ku wajahan jidka hadafkooda. Mascot-ka calaamaduhu waa mid ka caawin lahaa inay ka gudbaan dhammaan dhibaatooyinka oo ugu dambeyntii gaaraan yoolalkooda. Nuxur ahaan, qofka calaamaduhu wuxuu matalaa dhagaystayaasha ama macaamiishayada bartilmaameedka ah, iyo mascot-ka ayaa ina matala hadafkayaga ah inuu xalliyo dhibaatooyinkooda.
Waxaan la nimid khariidadda Brand Persona Go'aanka Iibka (BPBD). - Khariidadda BPBD waa liiska sababaha ku qasbi kara dhagaystayaasheenna bartilmaameedka ah inay wax naga iibsadaan iyo sidoo kale sababaha ka dhigi lahaa inayan iibsan. Tani waxay naga caawisay inaan fahanno go'aamada iibka ee shakhsiyadeena sumadda leh oo aan ogaano habdhaqanka ay u badan tahay inuu meesha ka saaro. Nidaamku wuxuu ku lug lahaa liiska sababaha ama sababta aysan dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi ay nooga iibsan lahaayeen.
Matrix nuxurka astaanta - Kani waxa uu ahaa garoonkii wiishka ee summadayada kaas oo lagu tiriyaa dhammaan sababaha iyo sida uu ganacsigeenu u jiro. Waxay muujinaysaa waxa ganacsigeenu qabto oo uu gaadhsiiyo qiyamka summadayada.
Sheeko-xaraash - Sheekada astaanta ayaa noo horseeday magacaabista ugu habboon, taas oo aan ugu dambeyntii qaadannay.
Natiijooyinka Dib-u-habaynta Lemon.io
Faa'iidooyinka aan la taaban karin ee dib-u-cusboonaynta waxaa ka mid ah inay noo keentay kalsooni, dhiirigelin, dareen macne iyo ujeedo, iyada oo aan la xusin qulqulka xamaasada leh ee hogaanka.
Iyo, dabcan, waxa ugu muhiimsan waa saamaynta ay dib-u-habaynta ku yeelatay xariiqda hoose. Sida ugu fiican ee tan loo caddeeyo waa tirooyinka sababtoo ah tirooyinka been ma sheegaan.
Natiijooyinku waxay ahaayeen kuwo aad u weyn oo waxay arkeen inaan gaarnay ku dhawaad ​​60% wadarta cabbirka taraafikada ee la helay shantii sano ee la soo dhaafay toban bilood gudahood markii aan bilownay summadayada Lemon.io.
Magac cusub oo dhammaystiran ayaa na arkay annaga oo ka guuraya 4K booqdayaasha una gudbayo 20K celcelis ahaan bishii noogu fiicnayd. Waxaan gaadhnay koror cajiib ah oo ah 5 jeer booqdayaashayada iyo iibkayaga oo noo saaraya 10M GMV sanadka 2021. Fiiri sawirada garaafyada ee koritaankan:
Kahor: Codaynta taraafikada Ninjas laga bilaabo bilawga shirkadda iyo ilaa dib-u-cusboonaynta:
Kadib: Horumarka lagu sameeyay sagaal bilood gudahooda laga bilaabo dib-u-habaynta.
Goorma ayay tahay inaad dib u calaamadiso haddii aad tahay bilaw (ku salaysan khibradda Lemon.io)?
Waqtigu waa wax walba. Dib-u-soo-saarista waxay u baahan tahay shaqo badan waxayna ku baxdaa kheyraad badan, waxaana muhiim ah in la sameeyo go'aanno la xisaabiyay.
Goorma ayay tahay wakhtiga ugu habboon ee magac-beddelka?
Lemon.io, waxaan ogeyn inay tahay waqtigii la bedeli lahaa sawirka shirkadda ee ururkayaga marka:
Ma shaqaynayn! Caddaynta ugu weyn ee dib-u-habayntayada waxay ahayd ogaanshiyaha in summadayada hadda jirta aysan keenin natiijooyinkii la rabay. Xaaladeena, waxay ahayd taraafikada xaddidan ee aan ku heli jirnay "Coding Ninjas". Waxaan aaminsannahay in aan hagaajino nuxurkayaga ilaa aan ugu dambeyntii ogaanay in aan si aan sax ahayn u taaganahay suuqa, waxaana loo baahan yahay in aan dib u soo saarno si aan u soo baxno.
Waxaa jiray isbeddello la taaban karo oo ku yimid ganacsigeenna - Shirkadaha si joogto ah ayay u horumaraan. Haddii meheraddaadu is beddesho ama aad si fiican u hagaajisay tirada guud ee astaantaada aad rabto oo aad rabto in aad si wax ku ool ah u taabato, magac-beddeliddu waxay noqon kartaa ikhtiyaar. Kahor intaadan u wareegin Lemon.io, waxaan ka shaqeynay sumad kale oo la taaban karo iyo shaqsiyaadka macaamiisha ah, taasoo ugu dambeyntii naga caawisay inaan sameyno doorashooyin wanaagsan oo aan ku garaacno dhibcaha saxda ah.
Kahor intaanan aad caan u noqon – Waxa aan fursad u yeelanay in aan magac-beddel ku samayno ka hor inta aanan caan ku noqon magacii hore. Ma dafiri karno xaqiiqda ah in khataraha la xidhiidha dib-u-samaynta ay kordhiyaan caannimada. Ka hor inta aan lagu aqoonsan, khataraha waa hooseeyaan sababtoo ah dadku si dhib leh uma ogaan doonaan.
Waxaan haysanay kheyraad nagu filan - Dib-u-cusbooneysiintu waa kheyraad-degdeg ah, markaa waxay ku habboon tahay markaad hore u leedahay ganacsi kasbaday ilo kugu filan si aad u bilowdo habka dib-u-habaynta.
Goorma ayaan ahayn waqtiga saxda ah ee magac-beddelka?
Dib u magac-u-samaynta waa inaan marnaba la fulin sabab adag la'aanteed. Waxaad ogtahay in dhiirigelintaada magac-beddelid ay khaldan tahay marka ay ka timaado shucuurta halkii ay ka ahaan lahayd xaqiiqooyinka.
Ku caajisay nashqada astaanta? Caajisnimadu waa sabab aad u xun oo dib u summaynta. Sababta oo ah inaadan u helin calaamad ku filan oo soo jiidasho leh macnaheedu maaha inaad bedesho. Kharashku maaha mid u qalma faa'iidada.
Marka ururkaaga waxba iska bedelin - Haddii aysan jirin isbeddello la taaban karo oo ku yimaadda ururkaaga, magac-beddeliddu waa macno darro. Looma baahna in la beddelo nidaam hore u shaqaynayay.
Sababtoo ah tartamayaashaada ayaa sidoo kale dib-u-samaynaya – Looma baahna in la raaco dadka badan. Go'aanka dib-u-soo-saaristaada waa inuu ku salaysan yahay baahiyahaaga gaarka ah iyo fahamkaaga yoolalkaaga mustaqbalka fog iyo fikradda guud.
Dib u calaamadaynta sidii maalgashi mustaqbalka ee ganacsigaaga
Waa xaqiiqo aan laga doodi karin in kasta oo kharashaadka halista ah ee waqtiga iyo agabka inta lagu jiro hannaanka dib-u-cusboonaysiinta, dib-u-soo-saarku had iyo jeer waa maalgashi mustaqbalka. Dhammaadkii wuxuu qiil ka dhigayaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada ku lug leh hawsha. Sidii aan horey u soo bandhignay, tirooyinka ayaa muujinaya koror weyn oo iibka ka dib markii aan dib u calaamadeynay. Nidaamku wuxuu ahaa mid naxariis leh labadaba xariiqda hoose iyo sawirka shirkadda.
Dib-u-cusbooneysiin karti leh waxay kordhisaa waxtarka guud ee shirkadda, waxay kor u qaadaa meelaynta cad, horumarinta suuqyo cusub iyo meelaha dhaqdhaqaaqa.
Habka calaamadaynta ama dib-u-samaynta waa hawl aad u cashuur badan oo lagu garto heerar aad u sarreeya iyo kuwa hooseeya marka loo eego sida laga yaabo inay u muuqato sheekadeena. Waxay u baahan tahay qorshe taxaddar leh, waqti sax ah, iyo ilo ku filan si loo saxo oo loo abuuro sumad runtii samayn doonta bayaan, wanaajisa dakhligaaga oo wanaajin doona sumcadaada guud. Dib-u-soo-saariddu waxay sidoo kale ka dhigan tahay samaynta horumarin si aad ula socoto waqtiyada.
Tags: ururka ganacsiga wakaalada xayaysiintaBPBDbrandmascot brandgo'aanka iibsashada ee personaliin.iolucidpressmagac badalka